Ipaki yeSizwe i-Mapungubwe ithola izinkulungwane zezivakashi ngosuku (kufaka phakathi amaqembu amaningi ezingane zesikole) futhi izinombolo ziyakhula njalo. Ngaphezu kwalokhu, izivakashi ezingu-60% zimnyama, okuhluke kakhulu kumanani abantu abamhlophe ahamba kwamanye amapaki izwe lonke.
Lokhu kungavumelana ngoba iMapungubwe iyipaki kazwelonke yokuqala ehlose ukukhombisa umlando waseAfrika; igubha umlando owawuphikisiwe noma ubandlulelwe. Amanye amapaki, ngakolunye uhlangothi, avame ukubonwa njengezandiso zesimiso sobandlululo futhi ngokujwayelekile ayengavunyelwe kwabantu bakuleli. Ukuhlanganelwa kweMapungubwe ngakho-ke into i-SAN Parks efuna ukukhuthaza kwezinye izindawo zayo zokulondoloza.
Kodwa kungaphezu nje kwezombangazwe. I-Mapungubwe ibonakala ithandwa ngoba iyindawo enhle yokuvakashela. Indawo engavamile futhi ehlukile. Amakamu okuphumula aphelele. Futhi ipaki nayo iqukethe izindawo ezintathu ezibalulekile zokuvubukula - intaba yeMapungubwe, iK2 naseSchroda.
Ipaki inikeza indawo yokuhlala enhle (okungcono kuneKruger) kanye nemisebenzi eminingi kanye nokukhangayo.
Indawo evelele epaki ayijwayelekile futhi iyamangalisa.
Eminyakeni eyizinkulungwane, lokho okwake kwaba yindawo ephakeme idliwe kude ukuze idale indawo yezintaba ezihamba phambili namagquma. Emaphethelweni eLimpopo, izinsalela zalolu daba ziya emgwaqeni omkhulu owehla emfuleni.
Ukuphakama kwamamitha kusuka ku-300 kuya ku-780 amamitha ngaphezulu kwezinga lolwandle.
Amagquma angasese kanye namaduli esifundazwe, njengeMapungubwe, adalwe lapho uhlaka lwechobe luye lwaqhekeka kakhulu, kwaze kwaba yilapho kushiywe khona inqwaba yamadwala avezekile.
La madwala abomvu ahlanganisa utshani obuphuzi ezigodini okunikeza isivakashi umqondo ocacile wombala.